Ukubonakala kokuqala kweTiger Woods kwiThelevishini
Umdlalo weTV we-TV oneminyaka emi-2 ubudala 'kuMike Douglas Show' (kunye noBob Hope)
I-Tiger Woods yaqala kumabonwakude kazwelonke ngexesha elidala ... ezimbini.
Ukuqala komboniso we-TV kaWols kwenzeka ngomhla ka-Oktobha 6, 1978. I-Woods - emva kweenyanga ezi-2 1/2 ihlazo lokuzalwa kwakhe wesithathu-yabonakala, kunye noyise u-Earl , kunye noBob Hope noJimmy Stewart, kuMike Douglas Show .
Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nomboniso nokubonakala kweTiger ngezantsi, kodwa kuqala ...
Indlela yokubukela umbukiso kaMike Douglas
Ibhola le-TV le-Woods eliphantse eli-3 elineminyaka engama-3 linokubukelwa njenge-clip grainy kwi-YouTube, kwaye mhlawumbi kufumaneke nakwezinye ii-tube tube zevidiyo.
Iziqeshana ezinjalo azikho iiklip ezipheleleyo ezivela kuMike Douglas Show , nangona kunjalo, kodwa ngokuqhelekileyo ziphuma ngaphantsi kwe-minute-minute. Nasi umzekelo omnye:
Jonga iTiger kuMike Douglas kwi-YouTube
(Ukuba le fowuni ingekho kwinkonzo, sebenzisa ibhokisi lokukhangela le-YouTube.com ukufuna "iTiger Woods uMike Douglas" kwaye uzakufumana ezinye iinguqulelo.)
Ubungqina obuphezulu, kunye nobuninzi obuninzi, inguqu yokubonakala kweT Woods ifakiwe kwi-DVD ye-DVD ebizwa ngokuba ngu- Mike Douglas-Ixesha kunye neNkumbulo . Iqokelela ezinye zeembonakalo ezivakalileyo ezivela kwi -Mike Douglas Show . Ixesha elide eliqhotyoshelweyo (alifumanekanga kwi-YouTube) liquka ukubeka umncintiswano phakathi kweTrans and Hope.
Okungakumbi Ngomdlalo weTV weTV
UMike Douglas Show yayingumboniso weentetho zemini owawususela ngowama-1961 ukuya ku-1982 kwithelevishini yase-America. Ezinye iindwendwe zikaDouglas kwisiqendu apho uThomas wenza iPhethri yakhe yesizwe kwakuyiimbali zokuzonwabisa uBob Hope noJimmy Stewart.
(Umdlali waseKristy McNichol ubuye wabonakala kwinqanaba, kodwa kungekho kwicandelo elincinci elincinci.) Ngandlela-thile kubonakala ngathi kufanelekile ukuba i-Woods ibonakale kwimeko yesizwe kunye neenkwenkwezi ezinkulu ezifana neThe Hope no-Stewart.
Ithemba, uStewart noDouglas, kunye noyise Earl, bebukele i-Tiger encinci ibonisa isimo sakhe sokuziphatha kunye neembalo ezimbalwa kunye nezinye zihamba kwi-turf mat.
Ngonyaka ka-2000, uDoulas waxoxwa yiphephandaba leCincinnati Enquirer , kwaye wakhumbula inxalenye yeT Woods nendlela awayeyibona ngayo kuqala iTiger:
"UMnu Douglas wabona iindaba zeendaba zeLos Angeles eToy Angeles ngowe-1978 malunga nabafundi bezemfundo kwiindawo zokuhamba." Yena (iTiger) waphuma njengesigubungelo esibuhlungu, kuba bonke babebetha njengabantwana, kwaye uguqa njengokuba uyenje ngoku, ' khumbula.
"Ngoko, uMnu. Douglas wabiza isikhululo, wafumana inombolo yefowuni yakwaTiger waza wayinika umthengisi. Kungekudala iTiger encinane yayiboniswe kwintsebenziswano yokumncintisana noMnu. Hope.
"I-Tiger ibanjwe iibhola ezi-10 ezidlulileyo emgodini, zahamba zaza zafaka ibhola yegolfu emlonyeni wendebe.
Ngendlela, kukho enye ukubukeka kwangoko kweTV yi-Woods kwi-YouTube. Ekuqaleni kweminyaka yama-1980, xa wayeneminyaka emihlanu, i-Woods yayibonakaliswe kwiYo Incredible (jonga kwi-YouTube) kwiqela elithathiweyo kwaye lilandelwa yiP Pro Football Hall yeQumrhu leQumrhu likaFran Tarkenton.
Ukubonakala kwamehlo kaMike Douglas kubonakala kwezinye iinguqulelo zakwi- Tiger Woods EA yemidlalo ye-franchise yemidlalo. AmaGamers angangena "imo yelifa," kunye nomdlalo we-2-year-old ubudala weTiger's TV wokuqala wabandakanywa kumdlalo (bona ividyo kliphu).
Buyela kwi-index ye- Tiger Woods index
Iifoto zePala Creamer
Biography ye Golfer Lorena Ochoa
Iprofayili Yomsebenzi weGene Littler
UkuPhuhliswa koPhuhliso: 12 AbaGoli abaye bachitha ixesha kwiJaji
Ukudibana nomfazi kaRory McIlroy u-Erica Stoll (kunye neengqumbo zakhe zangaphambili)
Iimpawu eziqhelekileyo zeFrench French Idiomatic nge 'Dire'
I-Joe Jackson Iingoma eziphezulu ze-80s
Kutheni Uvuko Lubalulekile?
Ibali emva kokuba iFoland Mustang ibizwe njani
6 I-Classic Tyrone Power Movies
I-BlueTEC ecocekileyo i-Diesel Technology
Iingxaki zokujongana neengxaki zeNjini
5 Iingcamango zokugwema xa ufundisa abantwana abantwana ukuba bahambe njani
I-Kent State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Funda indlela yokubhala iNkcazo eyongezelelweyo Inkcazo kwiMilinganiselo
Ukudala iNkqubo Yomsebenzi Wasekhaya Ngenjongo Nenjongo
Ubomi beProfethi Muhammad Life Early
Yintoni Injongo Inyaniso?
Ukuguqulwa kweNdumiso: iGlencoe Massacre